Dhacdadii ugu hadal haynta badnayd degaanada reer Falastiin shalay Horudhaca dhacdada – PuntlandNews24
8 July 2014 ayaa ciidamada Yuhuuda waxa ay weerar cir iyo dhul ah ku qaadeen degaanka Qaza iyaga oo doonayay in ay gacanta ku dhigaan isla markaasna ayka takhalusaan ururka Xamaas ee gacanta ku haya degaankaas kadib markii gantaaalo laga soo tuuray degaankaas ay Yuhuuda aragagax iyo cabsi weyn ku rideen.
Hadaba Yuhuudda oo dagaalkaas aan waxba la harin awoodeeda ciidan,iyada oo diyaaradaha degaalka ay habeen iyo maalin duqaynayeen shacabka taas oo galaafatay nolosha 2147 qof oo rayid ah isla markana lagu bur burshay dhismayaashii magaalada ,taas oo Yuhuudu ku doonaysay in reer Qaza ay isu soo dhiibaan balse waxa ay reer Qaza usii kordhisay kalsooni iyo in ay jilbaha u laabaan degaalka oo ay ciidamadii infantariga Yuhuudu ay khasaare nafeed oo ba ‘an kala kulmaan degaalka dhulka.
Iyada oo xaalku halkaas marayo ayaa waxa ay Yuhuudu ogaadeen in saraakiisha ciidan ee ururka Xamaas ee degaalka hogaaminaya ay yihiin Maxamed Abu Shamala ,Raid Alcadaar iyo Maxamed Barhuum.
Saddexdan hogaamiye waxa markasta degaalka ka hogaamin jireen meel qarsoon oo sir ah.
Hadaba waxaa dhacday 21 Augost 2014 in diyaaradaha degaalka ee Yuhuudu ay duqeeyeen goobtii ay saddexdan hogaamiye ay ku gabbanayeen ,dabadeedna halkaas ayku shahiideen..Arrintaasi waxa fajac iyo murugo ku abuurtii reer Qaza,waxana isla durbadiiba la iswaydiiyay sidee cadowga ku ogaaday goobta ay ku sugnaayeen.waxana durbadiiba Xamaas ay bilawday baaritaan dheer oo la xiriira ciddii ka damaysay in ay Yuhuuda u Sheegtay goobta hogaamiyaasha ,baaritaankii waxa uu galay mid ka mid ah qoyska reer Barhuum oo ah qoys lagu yaqaano halyeeynimada iyo weliba safka horana kaga jira degaalka.
Hadaba saraakiishii Xamaas waxa ay la wadaageen qoyskii natiijadii baaritaankooda iyaga oo qoyskana ka codsaday in ay iyaguna baaritaankooda sameeyaan.
Hadaba shalay oo taariikhdu ahayd 19_1_2018 ayaa qoyskii reer Barhuum waxa ay meel fagaare ah soo taageen wiilkoodii ku lug lahaa dhacdada ,iyaga oo shacabka u sheegay in baaritaankoodii ay ku ogaadeen in wiilkoodu uu ka dameeyay dhacdadii foosha xumayd uuna u qirtay , ayn ka heleen qalabkii uu hawsha ku fuliyay oo uu Yuhuuda kula xiriiray
Dabadeedna fagaarihii ayay ku dileen,iyaga oo uga digay in cidkasta oo Yuhuuda la xiriirta halkan la soo taagi doono.
Hadaba sidee u aragtaa mawqifka qoyska reer Barhuum?